Smart Watch ကပြတဲ့နှလုံးရဲ့အန္တရာယ်ကိုတကယ်ယုံကြည်လို့ရမလား?
Health ArticleSmart Watch ကပြတဲ့နှလုံးရဲ့အန္တရာယ်ကိုတကယ်ယုံကြည်လို့ရမလား?
အခုခေတ် ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်သူတွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ Smart watch ဟာ အချိန်ကိုပြရုံတင်မဟုတ်ပဲအိပ်ခြင်း၊ပြေး,လျှောက်ခဲ့တဲ့ခြေလှမ်းအရေအတွက်(သို့)ခရီးအကွာအဝေး၊နှလုံးခုန်နှုန်းတိုင်းတာပေးနိုင်ပြီး တချို့ brand တွေဆို Single lead ECG ပါဖော်ပြနိုင်တဲ့အတွက် လူတွေတော်တော်များများက smart watch ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း အထူးသဖြင့် (Atrial Fibrillation) လို့ခေါ်တဲ့အဖြစ်အများဆုံးနှလုံးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်းနဲ့ ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်နိုင်ခြေကို ကြိုတင်သိရှိနိုင်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပစ္စည်းကိရိယာတွေကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာသုံးနိုင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့သုသေသနတွေမရှိသေးပါဘူး ထို့အပြင် (False positive) အဖြေဖော်ပြချက်တွေမှားနိုင်ပြီး မလိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေကြောင့် ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်
နောက်ပိုင်းတွင် ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ smart watch ကပြတဲ့ အပေါ်နှလုံးခန်းက နှလုံးခုန်နှုန်းမမှန်ခြင်းကို နှလုံးအထူးကုနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့အကြံပြုထားတယ် အနဲဆုံးစက္ကန့် ၃၀ ခန့် single lead ECG test လုပ်ခြင်း(သို့) 12 lead ECG စစ်ကြည့်မှ အတည်ပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့် ဒီပစ္စည်းတွေဟာ မိမိအခြေအနေကိုသတိပြုနိုင်စေရန်အတွက် အခြေခံသဘောမျှသာပါတယ် တိကျတဲ့အဖြေနဲ့မှန်ကန်တဲ့ကုသမှုအတွက် နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ရန်လိုအပ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်